အော်.....ဖြစ်တက်လိုက်တာ..... | ငါဟာကွ.... ( ဟာသ ) ~ ITmanHOME
01:07 ဟာသ No comments
အော်.....ဖြစ်တက်လိုက်တာ..... | ငါဟာကွ.... ( ဟာသ )
အမေ။ ။ ဒီ ‘‘i don’t know’’ ဆိုတာဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။
အမေ။ ။ ဒါတောင် ၀န်မခံချင်ဘူး ！！！$@％!#$^&％#$％@$％@#$％!^％^!^％$
.)အမေ။ ။နင်သတိကြပ်ကြပ်ထားနော်။ ပိုက်ဆံတွေ ဒီလောက်အကုန်ခံပြီး တက္ကသိုလ်ပို့တာ၊
သွေးတွေအသားတွေ ထူပူလာတော့ အမေ့ကို မေးလိုက်တယ်။ ကဲ ကျေနပ်ပလား။ အဲဒီလဲကျရော
သူက ထပ်မေးပြန်တယ်။ ‘‘သားရယ်၊ i’m very annoyant, don’t trouble me ဆိုတာ
အမေ။ ။‘‘အင်း၊ ဒါမှ ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်။ ခဏနေကျရင် အမေစားစရာကောင်းကောင်းလေး
လုပ်ပေးမယ်။ မနက်ဖြန်ကျမှ ထပ်မေးတော့မယ်။’’
(အော် မုသား----ဆိုတာလဲ လောကအတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်း တခုပဲနော်...)
ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ နှစ်ယောက်အိပ်ခန်းကို ငှားပြီးခါမှ တစ်ယောက်ခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးပါရန် ဟိုတယ်မန်နေဂျာက မေတ္တာရပ်ခံလာသဖြင့် ကိုမြငွေသည် တစ်ယောက်ခန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ပါ၏။
မန်နေဂျာက ထိုအခန်းသို့ သမီးရည်းစားစုံတွဲတစ်တွဲအတွက် နေရာပေးလိုက်၏။ မိမိနေရမည့်အခန်းသို့ ရောက်ခါမှ ယခင်အခန်းတွင် ခုတင်ခြေရင်း၌ မိမိ၏ ထီးကောက်မေ့ကျန်နေခဲ့ကြောင်း ကိုမြငွေ သတိရ၏။
ထို့ကြောင့် ထီးပြန်ယူရန် ထိုအခန်းသို့ သွားလေ၏။ အခန်းအပြင်ဖက် တရားသို့အရောက်တွင် အတွင်းမှ သမီးရည်စားစုံစွဲ၏ စကားပြောသံကို ကြားရသဖြင့် ခေတ္တနားစွင့်နေမိ၏။
``ခင်ရယ်၊ ဟောဒီရွှေရောင်ဆံပင်လှလှလေးတွေက ဘယ်သူ့ဟာလဲဟင်´´
``အိုး၊ မောင့်ဟာပေါ့၊ မောင်ကလည်း´´
ထိုကဲ့သို့ မေးလာရော ပဉ္စငါးပါးကုန်ခါနီးလာ၏။ အပြင်ကနားထောင်နေသော ကိုမြငွေ အတော်ကို စိုးရိမ်စတ် ၀င်လာ၏။ ထို့ကြောင့် အပြင်မှနေ၍ လှမ်းအော်ပြောလိုက်လေ၏။
``အထဲက ကျေးဇူးရှင်လေး……… ကုတင်ခြေရင်းမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ထီးကောက်ကြီးကတော့ မင်းဟာဟုတ်ဖူးနော်…. အဲဒါငါ့ဟာကွ´´ တဲ့…..။